Narratif ka bidoro ngwa ọrụ ya dabere na teknụzụ ọchụchọ na-adịghị ọcha iji kpochapụ mkparịta ụka nke mkparịta ụka Twitter ma nye data nwere nkọwa. Kama ịnye akọrọ, data ọnụ ọgụgụ banyere mmetụta, ọnụ ọgụgụ nke retweets, wdg, Narratif na-arụpụta nsonaazụ edepụtara ma mee ka ọ dị ka mkparịta ụka dị elu (ma ọ bụ akụkọ) na ndị na-eme ihe ike. The interface dị mfe, ngwa ngwa na omume ọma tọrọ. Ọ na-enyere onye ọrụ aka ịmata data na-ewu ewu, chọpụta isiokwu ndị nwere mmetụta na ịchọpụta ndị na-emetụta ndụ. Ugbu a na
Anọ m na-agwa enyi m taa, Dale McCrory. Ọ rụtụrụ aka na mbido ọhụụ Adobe, Adobe Digital Edition Beta. Dabere na saịtị Adobe: Adobe Digital Editions bụ ụzọ ọhụụ ọhụụ iji gụọ ma jikwaa eBooks na akwụkwọ dijitalụ ndị ọzọ. A na-ewu Digital Editions site na ala dị ka fechaa, ngwa ntanetị bara ụba (RIA). Digital Editions na-arụ ọrụ n'ịntanetị na offline, ma na-akwado PDF na XHTML dabeere na ọdịnaya. Dale malitere iche echiche